२००० को लागि बेनामी लेखक द्वारा शीर्ष Qu०० उद्धरणहरू - उद्धरण पीडिया
१ quot उद्धरण र भनाइहरू
जीवन धेरै अप्रत्याशित छ। तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन अर्को क्षण के हुन्छ। यस्तो परिदृश्यमा, हामी जहिले चीजहरू फेला पछ्यौं जुन हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण छन्।
कहिलेकाँही हामी निराश र निराश महसुस गर्दछौं। प्रेरणाको एक सानो स such्केतले त्यस्तो परिस्थितिमा सँधै अचम्मका कामहरू गर्न सक्दछ। यसैले, बेनामी लेखक प्रोत्साहन र प्रेरणाको त्यो सानो स्रोत प्रदान गर्न तपाईलाई सँधै सँधै उपलब्ध गराइन्छ ताकि तपाईं कुनै पनि अवसरबाट कम वा निराश नहुनुहोस्।
यी लेखकहरूले आफ्ना विचारहरू लेख्ने धारणाको साथ आउनुको मुख्य कारण कुनै श्रेय वा नाम र प्रख्यातताको लागि होईन, तर तिनीहरू केवल तपाईंलाई केहि राम्रो र सकरात्मक वाइब्स दिने उद्देश्यले गरिरहेका छन् ताकि तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ। आफैलाई हतपती हलचलबाट बाहिर निकाल्नुहोस् र तपाईंको आफ्नै तरिकाले केहि नयाँ र रचनात्मक गर्न ऊर्जा पाउनुहोस्।
यी अज्ञात द्वारा उद्धरण सधैं आफैंमा प्रेम फैलाउने बारेमा कुरा गर्नुहोस्। प्रेम भनेको त्यो सकारात्मक उर्जा हो जसले खराबीलाई पनि पवित्र बनाउन सक्छ।
यो संसार घृणा र पीडाले भरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिबाट सबै नकारात्मक विचारहरू हटाउन र चीजहरू राम्रो र नवीन बनाउने सम्भाव्यताले त्यस व्यक्तिको भरिंदै जान मायाको निको पार्ने शक्ति छ।
यदि तपाईं वास्तवमै कसैलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँबाट राम्रो आत्मा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सायद त्यो व्यक्ति भित्र पसेको वर्षौं भइसकेको छ, तपाईं मात्र गर्न सक्नुहुने एक मात्र चीज भनेको त्यो व्यक्तिलाई बिना शर्त प्रेम गर्नु हो।
कसैलाई पनि निको पार्न प्रेमले ठूलो शक्ति पाएको छ, र यो त्यस्तो आत्मा हो जुन कुनै पनि व्यक्तिको मनसाय र मनसाय सदाको लागि बदल्न सक्छ। हामी प्राय: हराउछौं, र प्रेम एक मात्र उर्जा हो जुन तपाईंलाई पुनः आफ्नो मार्गमा फिर्ता लिन सक्दछ।
यी अज्ञात लेखक यहाँ छन् तपाईंलाई राम्रो उद्धरणको साथ प्रेरित गर्नुहोस्, तपाईंलाई प्रेम र प्रेरणाको महत्त्वको बारेमा सिकाउँदछ, र तपाईंलाई एकपटक सय पटक असफल भए पनि फेरि उठ्न मद्दत गर्दछ। तपाईलाई थाहा छैन कि यो १०१ औं समय तपाईको पक्षमा हुने छ!
सकारात्मक रहनुहोस् र विश्वास राख्नुहोस्। अझ राम्रा चीजहरू अगाडि छन्। - बेनामी
कठिनाइको सामना गर्नुपर्दा अगाडि बढ्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ तर मानिसहरू जसले उनीहरूको डर र…
व्यक्ति परिवर्तन गर्न प्रयास नगर्नुहोस्; तिनीहरूलाई मात्र माया गर्नुहोस्। प्रेम भनेको हामीलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हो। - बेनामी
हामी सबै एकै तर अनौंठो छौं। हामी सबैको केही कुरा छ जुन हामीलाई ...
सबै चीजप्रति सकारात्मक मानसिकताले तपाईंलाई खुशीको जीवन दिन्छ। - बेनामी
आशाले हामीलाई निरन्तरता दिनेछ। यसले हामीलाई कठिनाइको समयमा पनि अगाडि हेर्ने उर्जा प्रदान गर्दछ। मा ...
अरूमा कहिले पनि निर्भर नहुनुहोस्। - बेनामी
जीवनमा, हामी एक्लै आउँछौं र एक्लै जान्छौं। जब जीवन बढ्दै जान्छ, हामी धेरै सम्बन्ध बनाउँछौं। तिनीहरु मध्य धेरै जसो…
तपाईंको आशिष् गणना गर्नुहोस्, समस्याहरू होइन। - बेनामी
जीवनमा, मनोवृत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो हाम्रो परिप्रेक्ष र कार्य हो कि हामी को हो भनेर परिभाषित गर्दछ। हाम्रो दृष्टिकोण ...
हाँस्नुहोस् र एक दिनको जीवन तपाईंलाई निराश पार्दै थकित हुनेछ। - बेनामी
जब हामी जीवनमा हिंड्छौं, यो अपरिहार्य छ कि हामीले राम्रो र नराम्रो समयहरूको पनि सामना गर्नेछौं ...
शब्दहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्, कार्यहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। - बेनामी
शब्दहरू बिना कार्य खाली हुन्छन्। हामी बस्न चाहन्छौं र हामीले चाहेको बिभिन्न चीजहरूको बारेमा सोच्न सक्छौं ...
कहिले हार नमानु। ठूला चीजहरूले समय लिन्छन्। धैर्यवान हुनुहोस्। - बेनामी
जीवन मा, तपाईं विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं हार मान्नुहुन्छ। एक परिपक्व र बुद्धिमान…
केहि चीजहरूको लागि समय लाग्छ। धैर्य गर्नुहोस् र सकारात्मक रहनुहोस्, चीजहरू अझ राम्रो हुँदै जान्छ। - बेनामी
यसले भन्छ कि नदीले शक्तिको माध्यमले काट्छ यसको शक्तिको कारणले होइन तर यसको कारणले ...
वर्षा बिना, केहि बढ्दैन, आफ्नो जीवनको तूफान अँगाल्न सिक्नुहोस्। - बेनामी
यसले भन्छ कि असफलता हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो किनभने ती केवल हामीलाई आकार दिन्छ ...
जीवन साँचो साथीहरु संग राम्रो छ। - बेनामी
जीवन साँचो साथीहरूको साथ उत्तम छ, र यो सत्य हो! यद्यपि हामी वरपर धेरै व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ ...
यदि तपाईं नकारात्मक अवस्थामा सकारात्मक रहन सक्नुहुन्छ, तपाईं जीत। - बेनामी
जीवनमा, तपाईले संघर्ष गर्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो लडाई तपाई बाहेक अरू कुनैसँग छैन। यो छ ...
प्रत्येक दिन उठ्नुहोस् र जीवनको लागि धन्यवादी हुनुहोस्। - बेनामी
धैर्यवान हुनुहोस्। राम्रा कुराहरुमा समय लाग्छ। - बेनामी
अरू मानिसहरूलाई तपाईंको दिन बर्बाद गर्न अनुमति नदिनुहोस्। - बेनामी
जीवन अनमोल छ। हाम्रो जीवनमा मानिस विशेष छन् तर सम्बन्ध विकासको प्रक्रियामा, ...
सकारात्मक मनोवृत्तिले क्षमता र आकांक्षाबीचको भिन्नता कम गर्न मद्दत गर्दछ। - बेनामी
हामी सबैलाई बिभिन्न विभिन्न क्षमता र प्रतिभाको साथ आशीर्वाद छ। जब हामी ठूला हुन्छौं, हामी खुलासा हुन्छौं ...
एक चतुर व्यक्तिले के भन्नु पर्छ थाहा छ। एक बुद्धिमान व्यक्तिलाई थाहा छ कि छैन भन्न छ। - बेनामी
चतुर व्यक्ति भनेको त्यस्तो हो जुन कुनै पनि परिस्थितिमा के भन्ने भनेर थाहा छ। उहाँसँग भएको अनुभव ...
जब जीवनले तपाईलाई रोक्नको लागि सयौं कारण दिन्छ, जीवन देखाउनुहोस् कि तपाईसँग हाँस्न र हाँस्नका लागि लाख कारणहरू छन्। बलियो रहनुहोस्। - बेनामी
जीवन कहिल्यै सहज हुँदैन। तपाईंसँग टुक्रिने, बिग्रिएको महसुस गर्ने र रुने प्रशस्त कारणहरू छन्। जे होस्, ...
जीवन धेरै विडम्बनापूर्ण छ। यो खुशी भनेको के हो भनेर जान्न उदासिनता, शान्तिको मूल्यांकन गर्न शोर, र मूल्य उपस्थितिमा अनुपस्थिति जान्छ। - बेनामी
जीवन विडंबनापूर्ण छ र यो सत्य हो। हामीले केहि चीजहरूको मूल्य बुझ्दैनौं जब सम्म र ...
कृतज्ञताका साथ प्रत्येक दिन सुरू गर्नुहोस्। - बेनामी
प्रत्येक एक दिन कृतज्ञताका साथ सुरु गर्नुहोस् र यसले अन्ततः तपाईंको आत्मालाई बढावा दिनेछ ताकि तपाईं ...
केहि घट्नाको लागि इच्छा गर्न रोक्नुहोस् र यसलाई घटित बनाउनुहोस्। - बेनामी
मानिसहरु पृथ्वी मा धेरै महत्वाकांक्षी प्रजातिहरु छन्, पनि धेरै धेरै अल्छी पनि। हामी सबैमा सफलताको कामना गर्दछौं ...
आँखा बन्द गरेर आफ्ना सपनाहरू सपना देख्नुहोला, तर आफ्ना सपनाहरू आँखाहरू संगै बाँच्नुहोस्। - बेनामी
सपना हाम्रो जीवनको एक अनिवार्य अंश हो। यदि कसैले सपना देख्दैन भने, त्यो व्यक्तिसँग धेरै…
जीवन अरूको लागि राम्रो हुन जब तपाईं आफूलाई राम्रो हुन सिक्छ जब जीवन सुन्दर हुन्छ। - बेनामी
आत्म-प्रेम अत्यावश्यक कुरा हो तर हामी यसलाई प्राय: बेग्लाबेग्ल सम्बन्धहरू कायम राख्दै बेवास्ता गर्दछौं।
असफलता सफलताको स्तम्भ हो। असफलता बिना, यो स्वादको मजा लिन तपाईंको लागि गाह्रो हुनेछ ...
मौन अनावश्यक नाटक भन्दा राम्रो छ। - बेनामी
बिभिन्न अनुभवले हामीलाई फरक तरिकाले ट्रिगर गर्दछ। तर हामी सबैले बिभिन्न परिस्थितिहरूमा उचित प्रतिक्रिया दिन सिक्नुपर्दछ ताकि ...
दयालुताले तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर व्यक्ति बनाउँदछ, तपाईंको जस्तो देखिँदैन। - बेनामी
तपाईंको हेर्ने तरिकामा सुन्दरता झूटो हुँदैन, तर यो तपाईंको व्यवहार गर्ने तरिकाको रूपमा हो ...
यो गर्नुहोस् किनकि उनीहरूले भने कि तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न। - बेनामी